Ny seho voafafa 'A Nightmare on Elm Street' dia mahatonga an'i Freddy Krueger ho ratsy kokoa
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny seho voafafa 'A Nightmare on Elm Street' dia mahatonga an'i Freddy Krueger ho ratsy kokoa
Freddy Krueger dia ratsy fanahy
by Trey Hilburn III Novambra 23, 2021
by Trey Hilburn III Novambra 23, 2021 53,484 hevitra
Hitako fa mahatsikaiky foana ny nahatonga an'i Freddy Krueger ho tafiditra ao anatin'ny kolontsaina pop. Ny ankizy dia nanangona fitoeran-dranomamy vita amin'ny lohan'i Freddy Krueger Garfield. Mampalahelo fa tsy olona tsara ilay lehilahy. Raha ny marina dia mpanendaka sy mpamono olona izy. Na izany aza, dia nanao ny lalana ho any amin'ny karazana collectibles ho an'ny kiddos izy. Heck, fony aho mbola kely, dia nitanisa an'i Freddy Krueger foana aho. Amin'ny iray amin'ireo Nofy ratsy teo amin'ny Elm Street's Ireo sehatra voafafa, dia nambara fa i Freddy dia mbola mpamono olona sy ratsy kokoa noho ny ninoanay ny famoahana an-tsehatra.
Tadidinareo ny zava-niseho rehefa niresaka tamin'ny reniny momba ny niandohan'i Freddy Krueger i Nancy, sa tsy izany? Io no sehatra fampahafantarana izay nahatonga ny renin'i Nancy niresaka momba ny boiler sy ny fitaovan'i Freddy. Eny, ao amin'ny sehatra voafafa dia mahita dikan-teny miitatra amin'io fotoana io isika - izay nampahafantatra azy ny renin'i Nancy fa tsy i Nancy no voalohany tamin'ireo zanaky ny reny. Efa novonoin'i Freddy ny zaza vao teraka.
Niitatra tamin'ny ray aman-drenin'ny Elm Street rehetra izany. Efa namono ny zanany rehetra indray mandeha i Freddy. Tsy vitan'ny hoe fampirantiana mahafinaritra adala izany, fa mety ho tonga lafatra amin'ny manaraka Alarobia eny amin'ny arabe Elm sarimihetsika. Somary manjavozavo izany, saingy mety hifantoka amin'ny famonoana an'i Freddy an'io andian-jazakely io. Mieritrereta zavatra hafahafa fa miaraka amin'i Freddy. Manjavozavo tokoa, fa mety hahatonga ny prequel ho helo.